"chaser" ကဘာလဲ? - Porn On Brain - ယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်
“ Chaser” ဆိုသည်မှာမကြာခဏသို့မဟုတ်နောက်တစ်နေ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အော်ဂဇင်နောက်လိုက်သည့်ပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သူတို့သည်ဖြစ်နိုင်သောသဘာဝအထွတ်အထိပ်မှအာရုံကြောဓာတုပြောင်းလဲမှုများမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အမျိုးသားများကမကြာခဏ chaser သည် ဦး နှောက်သည် rebooting ပြုလုပ်ချိန်တွင်ချိန်ခွင်လျှာအသစ်ရှာတွေ့သည်နှင့်အမျှအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဖြေလျော့ပေးတတ်သည်ဟုအစီရင်ခံလေ့ရှိသည်။
ပိုပြီးအဘို့အဖတ် သင်ကလိင်ပြီးနောက်တစ် Chaser လိုအပ်ပါသလား သုတ်ရည်လွှတ်ကြည့်ဖို့ related neurochemical ဖြစ်ရပ်များ၏စေ့စေ့စပ်စပ်ဆွေးနွေးမှုများအတွက် အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား? “ chaser effect” ကိုတရားဝင်လေ့လာခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
ဤတွင်“ chaser” ၏သက်သေအထောက်အထားများရှိသောပုံမှန်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံစာများကိုတွေ့နိုင်သည် သင်ကလိင်ပြီးနောက်တစ် Chaser လိုအပ်ပါသလား):
အဘယ်သူမျှမ FAP ယောက်ျားတွေဖြစ်ကောင်းသင်သည်လိင်နှင့်အတူ fapping အစားထိုးနိုင်ပါတယ်ထင်နှင့်စစ်မှန်သောလိင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နေစဉ်သင်ပြင်းထန်ကြသည့်အခါဖြစ်သည့် "Chaser Effect" 1 လိင်ပြီးနောက်3ရက်တိုက်တွန်းပါသည်။ အဖြစ်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူပြင်ပမှလွယ်ကူသောကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ ငါအတိတ်ထဲမှာပြန်ရောက်သွားတယ်အခါတိုင်းကလိင်စုံတွဲတစ်တွဲရက်ပေါင်းနှင့်အတူရှိ၏။
အဆုံးမှာ ၇ ရက်အကွာမှာသိသာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကပိုပြီးရှင်းလင်းတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကအရမ်းမြင့်တယ်၊ ငါက“ La La Land” မှာအတော်အသင့်ပါ။ တကယ်တော့ငါ NoFap ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆူညံသံကိုခံစားရန်လာခဲ့ကြပြီ၊ fapping မှတစ်ဆင့်အော်ဂဇင်၏“ ပျော်ရွှင်မှု” ထက်များစွာများစွာရှိသည်။ သိချင်စိတ်ပြင်းပြစွာဖြင့်ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ပြန်ရုတ်သိမ်းရန်နှင့်ဤ“ စူပါအင်အားကြီး” အသစ်များသည်လျော့နည်းမသွား၊ ငါ porn ဝက်ဘ်ဆိုက်များအများအပြား loaded နှင့်ငါ့ပုံမှန်အတိုင်းဖက်ရှင်အတွက်လုပ်ရပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။
cumming ပြီးနောက်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲကျွန်မခံစားခဲ့ရကြောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလိုပဲအတွက်အဆင့်ပြောင်းကုန်ပြီရိုးရှင်းစွာအံ့ဖှယျဖြစ်ခဲ့သည်။ မြူတစ်လတ်ဆတ်တဲ့အလွှာကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးကျော် draped ခဲ့သော်လည်းကြောင့်ခံစားရတယ်။ ချက်ချင်းနီးပါး, ငါကို စိုးရိမ်. , ကွာဟတဲ့အတွက်နှင့်မကျေနပ်မှုတစ်ခုလွှမ်းမိုးသောအသိခံစားရတယ်။ ငါ၏အစမ်းသပ် relapse ပြီးနောက်ငါသည်ငါ့အိမ်စာပြန်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြောင့်လုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်နေဖို့နီးပါးမဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မရုတ်တရက်နောက်တဖန် FAP ဖို့တိုက်တွန်းခံစားခဲ့ရ, Imgur browse, Facebook ကိုစစ်ဆေး, ငါ့တိုက်ခန်းကိုသန့်ရှင်းစေ, ဟင်းလျာများလုပ်နှင့်အခြေခံအားဖြင့်လက်မှာလေ့လာမှုများပြီးဆုံးမှလွဲ။ လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ နောက်နေ့သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကျွန်ုပ်ကောလိပ်ကျောင်းသို့သွားခဲ့သည်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာသိသိသာသာရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်တခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောဖို့ကျွန်မတွန့်ဆုတ်သွားတယ်။ တကယ်တော့၊ ငါ့ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းအကောင်းမြင်သဘောထားကိုတင်ပြဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုတယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့အရေပြားကိုမသက်မသာဖြစ်စေခဲ့တယ်။ Self-အစီရင်ခံစာ
အဆိုပါ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတကယ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောနိုင်ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်ငါအခြေခံအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမမတရားသောခဲ့ကြသော်လည်း။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ M နဲ့ PMO အကြားကြီးမားတဲ့ကွာခြားချက်ရှိတယ်။ M ကမင်းကိုခဏလောက်စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ PMO ကတော့မာရ်နတ်ပါ၊ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်နဲ့တကယ်ကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဘိန်းဖြူပဲ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအရ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် PMO နှင့် M ထက်ပိုမိုဆက်စပ်သည်။ သို့သော်ယခင်က M ကိုကပ်ရန်ကြိုးစားခြင်းကငါ့ကို M နှင့်အတူဓာတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ရှင်များကို ထပ်မံ၍ စတင်အသုံးပြုခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အထူးဂရုပြုရန်သေချာသည်။
ငါထင်တာကတော့ငါ့ရဲ့“ အစီအစဉ်အစီအစဉ်” အသစ်နဲ့ reboot ပြီးသွားရင်ငါ့မှာရည်မှန်းချက်အသစ်တစ်ခုရှိနေလို့ပါ။ ငါနောက်ဆုံးပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါငါလုပ်ချင်တိုင်း M ကိုလုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာ pmo-addict အတွက်ကောင်းတဲ့နည်းဗျူဟာမဟုတ်ဘူး။ သင်လိုချင်သည့်အခါတိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့လျှင်၊ ခဏအကြာတွင်၎င်းသည်ငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်လာပြီးအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုများပိုမိုလိုချင်သည်။
ငါ့ကိုသတ်ဖြတ်နေသည့်အရာတစ်ခုမှာ 'chaser effect' ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ O. အပြီး ၁၂-၂၄ နာရီအကြာတွင်ကျွန်ုပ်ရရှိရန်အလွန်တရာတိုက်တွန်းချက်မှာကျွန်ုပ်သည်အတိတ်ကာလ PMO ကိုအနည်းငယ်ချန်ထားခဲ့ပြီးပါပြီ၊ သို့သော်လည်းငါသည်သင်ဤကျော်လွန်ရလမ်းကိုအရိပ်လက္ခဏာအသိအမှတ်ပြုရန်ယုံကြည်ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ကျွန်ုပ်သည်အိုရှိသည့်အခါတိုင်းအိမ်အပြင်ဘက်တွင်ရှိခြင်းနှင့်လူများအနားတွင်ရှိနေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အိပ်ရာအဆာအငတ်တွင်အိပ်နေခြင်းနှင့်အင်တာနက်ကိုမရည်ရွယ်ဘဲအင်တာနက်ကြည့်ရှုခြင်းများကိုဆန့်ကျင်။ အလုပ်များနေသည့်နေ့ကိုလိုက်နာသည်။ အားရစရာတစ်ခုအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်
ဒီနေ့ငါမိုင်တစ်မိုင်ကနေတိုက်တွန်းမှုတွေကိုမြင်နေရတယ်။ အခုသူတို့ကိုကြိုဆိုပါတယ် ကျွန်တော့် ဦး နှောက် chimp နည်းနည်းဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်။ ငါ PMO အပြည့်အဝသွားပြီး chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှောင်ရှားလျှင်ဒီခရီးစဉ်ကပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ ရပ်ပြီးကတည်းကငါဝေးဝေးမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ရှု, ငါဖြစ်ချင်တယ်ကောင်လေး, ငါအတိတ်ကာလ၌ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်လေး။ https://www.yourbrainonporn.com/age-22-proactive-social-energetic-confident-all-my-friends-co-workers-have-noticed
သတိပြုပါ။ Chaser Effect သည်အမှန်တကယ်ပင်လူများဖြစ်သည်။ ငါမနေ့ကနောက်တဖန်သူမ၏ပြန်ရှိခဲ့အချို့သော RL အရေးယူမှုရရှိခဲ့ပေမယ့်လွန်ခဲ့သော3ရက်အတွင်းအကြှနျုပျ၏တုန်လှုပ်ဆယ်ဆတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဒါမှမဟုတ်၊ ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းဟာတစ်တန်ကျဆင်းသွားတယ် http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2rooc0/beware_the_chaser_effect/
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိပ်ရာဝင်ကြသည်။ အဝတ်အစားတွေကိုစုတ်ဖြဲပစ်လိုက်တယ်ငါဖြောင့်ဖြောင့်မတ်တယ် (woohoo!) ကျနော်တို့လိင် ၂ နာရီခွဲလောက်လိင်ဆက်ဆံတယ်။ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်ရှည်လျားတဲ့ရိုက်ချက်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာ။ သူမသည်တကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းသော်လည်းပွင့်လင်းရိုးသားမှုရှိသည်။ ငါအဆုံးတိုင်အောင်အော်ဂဇင်မလုပ်ဘူး (အပြည့်အဝ reboot မဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုဝန်ခံရမယ်) ။ သို့သော်ငါ၌အာရုံခံစားမှုနှင့်ယခုအချိန်တွင်သက်သက်သာသာရှိသောပြင်းထန်သောအော်ဂဇင်ရှိသည်။ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံဖြစ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ငါအိမ်ပြန်လာတဲ့နောက်ဆုံးမိန်းကလေး (pre nofap) ကအရမ်းစိတ်ဆိုးလို့မထနိုင်တာနဲ့သူကမြန်မြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ အတွေ့အကြုံမကောင်းဘူး။ Self-အစီရင်ခံစာ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကြောက် chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာအရမ်းကိုချိုလွန်းလို့သူမရေချိုးခန်းထဲဝင်လာတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာအဲ့ဒီညနေမှာ dopamine အများကြီးထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာကျွန်တော်တကယ်စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။ ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (ကြီးမားသောသွေးဆောင်မှုကြားမှအဘယ်သူမျှမ porn, ငါအတွေ့အကြုံနှင့်ခံစားချက်ပဲထင်) ။ ငါသည်ငါ့ကောင်တာကို reset (ကအားလုံးကို mode ကိုခဲယဉ်း mode ကိုအကြောင်းကို?!) ဒါပေမယ့်ငါကိုယ်တိုင်အဘို့သီးခြားကောင်တာကိုစောင့်ရှောက်မည်။ ဒါဟာအနာဂတ်အတွက်ကောင်းကောင်းသင်ယူဖို့ပါ။ ကျွန်တော်ဒီနေ့ငါ့လက်တွေကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီ။
ပြီးခဲ့သည့်ညကငါတို့အချစ်ချိုကိုသာပြုလုပ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်ခန်းမကိုလှန်လှောကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်မနက်ကိုကြည့်နေသည့်အရာကိုကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ (သူမသည် chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသူသိသည်။ သူမကျွန်ုပ်၏ပြတင်းပေါက်များကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ ဒေါသထွက်နေသော Birds / Reddit ကျွန်ုပ်၏သမီးအတွက် fap / Golf နည်းပြဆရာမလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့် Fap စစ်သည်တော်မဆိုပြုသကဲ့သို့ငါပြုခဲ့သည်။ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသူမအတိအကျပြသခဲ့သည်။ ပြီးတော့သူမအိပ်ခန်းထဲကိုလိုက်ဖမ်းလိုက်ပြီးသူမရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုအခုပဲငါလိုက်ပြလိုက်တယ်။ ငါ့ကိုသွားကြပါ ဦး ။
သူမကကျွန်မကိုထပ်ခါထပ်ခါသူမ၏ချင်စေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ယခုတွင်ငါသည်သူမ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု ~ အဆိုပါ Chase ကကိုခေါ်ပါ။ ငါအရမ်းရယ်ရတယ်, တနေ့လုံးန်းကျင်သူမ၏လိုက်။
မနေ့ကငါဒီအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ redhead နှင့်အတူ #2ရက်စွဲရှိသည်။ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကိုသွားပြီးနောက်တော့ကျွန်မတို့နေရာကိုသွားဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်။ အရာတစ်ခုကနောက်တစ်ခုဆီ ဦး တည်သွားပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်အော်ဂဇင်တွေရှိခဲ့တယ်။ တကယ့်ကိုကြီးကျယ်လှပါတယ်။ ဒီတော့ငါရုတ်တရက်ပြင်းထန်သောစိတ်ဆန္ဒများကိုရရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါငါရှိခြင်းငါသဘောပေါက်လာတယ် အဆိုပါ Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု မနေ့ကအော်ဂဇင်ရှိခြင်းကနေ။ NoFap သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအနာပျောက်စေသောအရာအဖြစ်သို့ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏စွမ်းအင်သည်စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကနှေးကွေးပုံရသည် - ကွန်ပျူတာရှိအိပ်စက်ခြင်းပုံစံနှင့်တူသည်။
ငါနီးပါးလုပ်နိုင် ခံစား ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ရဲ့ dopamine receptors ပုံမှန်ပြန်လာ (အဆင်မပြေ btw) ။ ဒါပေမယ့်မနေ့ကအော်ဂဇင်မျိုးကပြန်ပေါ်လာစေတယ်။ ဒီဖြန့်ချိမှုအတွက်သဘာဝဖြစ်စဉ်သည် PMO ဖြစ်သည်။ ရုတ်တရက်၊ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြော, chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမှန်ကန်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတာကောင်းတယ်။ နှင့်၎င်း၏ရောက်ရှိလာဖော်ထုတ်ရန်။ Chaser ကိုသတိပြုပါ
လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၉၀ က "chaser effect" အကြောင်းကိုဖတ်။ ကျွန်ုပ်အပေါ်ကျရောက်လိမ့်မည်ဟုမစဉ်းစားသည်ကိုသတိရမိသည်။ ငါမှားလိုက်လေခြင်း! အဆိုပါ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုအစွမ်းထက်အရာဖြစ်၏။
chaser ကိုယ်နှိုက်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်သုတေသနကိုမျှကျွန်ုပ်တို့မသိပါကဤလေ့လာမှုရလဒ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်သေပြနိုင်သည်။
ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory-9 ရမှတ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive စဉျးစားကွညျ့သလား? Abstinence ကြိုးပမ်းမှု၏အခန်းက္ပ Exploring (2017)။ ၁၄ ရက်ကြာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားသော်လည်းအခြားလိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ပြုသည် (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ လက်တွဲဖော်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အင်တာနက်မဟုတ်သောညစ်ညမ်းမှုများကိုကြည့်ရှုခြင်း) ပြုလုပ်သောအမျိုးသားများတွင်အခြားရွေးချယ်စရာလိင်ဆက်ဆံမှုများတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်တက် လှုပ်ရှားမှုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ခြင်း (“ ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိခြင်း”) ။ တစ်နည်းဆိုရသော်“ အခြားလိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု” သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်မဟုတ်ပါ။ စက္ကူမှ:
table ထဲမှာနံပါတ်များကိုနားလည်ဘို့ [သိကောင်းစရာများ: သုညနှစ်ခု variable တွေကိုအကြားမျှဆက်စပ်မှုကိုဆိုလိုသည်; 1.00 နှစ်ခု variable တွေကိုအကြားတစ်ဦးပြည့်စုံဆက်စပ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ အရေအတွက်2variable တွေကိုအကြားဆက်စပ်မှုဟာပိုမိုအားကောင်းအဆိုပါပိုကြီး။ နံပါတ်တစ်ရှိပါက အနှုတ် သင်္ကေတ။ ဆိုလိုတာကအရာနှစ်ခုကအနှုတ်ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ (ဥပမာအားဖြင့်၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်နှလုံးရောဂါအကြားအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်ဘာသာစကားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းသည်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အဝလွန်ခြင်းသည် အပြုသဘောဆက်စပ်မှု နှလုံးရောဂါနှင့်အတူ။ ]
နေ့စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire နှင့်ရောနှောထားသောလိင်စုံတွဲများအတွက် Next ကို-နေ့ Desire နှင့်အပြုအမူအပေါ်၎င်း၏သက်ရောက်မှု
တွေ့ရှိချက်များအရနေ့စဉ်လိင်ဆန္ဒသည်နောက်တစ်နေ့တွင်လိင်ဆန္ဒကိုတွန်းအားဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသားများအတွက်အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပါ ၀ င်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင်တစ်နေ့တွင်လိင်ဆန္ဒသည်နောက်တစ်နေ့မိတ်ဖက်များအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်ပွားသည့်နေ့များ၌သက်ရောက်မှုရှိသည်။